Raw Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3) Ndị na-emepụta ya - Phcoker Chemical
Sunifiram (DM-235) ntụ ntụ bụ ụdị nootropics. Ọ bụ ihe pụrụ iche sịntetik emepụta nke piracetam na ebe nchekwa, mmụta, na ọnọdụ imezi …… ..
ikike: 1285kg / ọnwa
Raw Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3) video
Raw Sunifiram ntụ ntụ, nke a makwaara dịka DM-235, bụ mmemme ọhụrụ na-akpali akpali na nkwalite mmezu nke cognition. Ọ dị ka nke racetam nootropics ma banyere 1,000 ugboro ike karịa piracetam.
Raw Sunifiram ntụ ntụ a maara na ọ na-arụ ọrụ site na ịme ka ọrụ nke ndị na-anabata glutamate na-eme ka ọ dị elu na site n'ịgbalite mmepụta na ntọhapụ nke "mmụta neurotransmitter" acetylcholine. A kwenyere na ihe mbụ bụ Raw Sunifiram ntụ ntụ bụ nke ampakine, nke pụtara na mgbe ị gafesịrị ihe mgbochi ụbụrụ ọbara na-ejikọta ndị na-anabata glutamate nke AMPA na ụbụrụ. Nke a na-akpali mmepụta nke glutamate, onye dị mkpa nke neurotransmitter nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ime mmechi ọkpụkpụ.
Glutamate bụ ihe na-akpali akpali nke neurotransmitter bụ nke dị oké mkpa maka plasticizing synaptic, ma ọ bụ ikike nke mgbatị ahụ na-eme ka ọ dịkwuo mmụba ma ọ bụ na-ebelata na ọrụ.Raw Sunifiram ntụ ntụ na-echekwa na ọ na-eme ka cholinergic, na-amụba mmepụta na ntọhapụ nke neurotransmitter acetylcholine.
Raw Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3) Smmezi
Product Name Raw Sunifiram ntụ ntụ
Chemical Aha DM-235,1- (4-benzoylpiperazin-1-yl) propan-1-one, Piperazine
Brand Name Raw Sunifiram ntụ ntụ, DM-235
molekụla Fnhazi C14H18N2O2
molekụla Wasatọ 246.304 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 246.31
Mgbu Point 98-100 ° C
Ọkara Ndụ nke Ndụ 4.5-6.5 awa
Sume Airtight, akọrọ na ventilated
Antinye Meziwanye Ebe nchekwa, Mee ka mmụta ka mma ma belata nhụjuanya mgbu, wdg.
raw Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3) Nkọwa
Sunifiram (DM-235) bụ ọgwụ piperazine nke ọgwụ ọgwụ ampakine, nke yiri nke racetam nootropics ma banyere 1,000 ugboro ike karịa piracetam. Nnyocha ole na ole dị na ya dị ugbu a, ma ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ na-egosi na ọ nwere ike ịbụ oke mgbatị na ọgwụgwọ maka ọrịa dịgasị iche iche gụnyere ọrịa Alzheimer, ọrịa Parkinson, na amnesia.
Sunifiram bụ nke e bipụtara na 2000 site na ndị ọkà mmụta sayensị na Mahadum nke Firenze na Ịtali. Nnyocha na-enye echiche na ọkpụkpụ sunifiram nwere ike ime ka ikike ụbụrụ, ọnọdụ, na ike ụbụrụ dị ike ọbụna mgbe a na-ewere ya na ọ dị ala.
Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3) Ime ihe
A maghị usoro usoro nke sunifiram, ma a maara ya site n'ịkpalite ọrụ nke ndị na-anabata glutamate na site n'ịgbalite mmepụta na ntọhapụ nke "mmụta neurotransmitter" acetylcholine.
Sunifiram na-eme ka onye na-enweta glutamate, NMDA. Ọ na-eme ka ọnụọgụgụ nke njiri na-ebute n'agbata ụbụrụ akwara ụbụrụ (bụ neurotransmitter). Nke a nwere ike inye aka weghachite ọrụ ncheta na ụbụrụ nke gbanwere ma ọ bụ nke ahụrụ.
Sunifiram ntụ ntụ na-emekwa ka mmepụta na ntọhapụ nke neurotransmitter acetylcholine. Acetylcholine nwere njikọ chiri anya na ọtụtụ akụkụ nke cognition, gụnyere ncheta, ọsọ mmụta na ike, na ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike ịmepụta nsogbu ndị pụrụ iche na-enweghị ịdabere na omume mmụta.
uru of Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3)
Eme ka mmuta na ncheta
Nwere ike imeziwanye nchebe, mkpali, na uche nke uche
Mood na Energy Booster
Mmezi Anya na Nghọta
-atụ aro Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3) Ọgwụgwọ
Dabere na nchịkọta nke akụkọ ndị ọrụ na ozi ndị e nwetara site na ọmụmụ ụmụ anụmanụ, a na-ewere usoro ọgwụ nke 5-10 mg nke kachasị okpukpu atọ kwa ụbọchị dị ka nchekwa ma dị irè.
mmetụta of Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3)
Ka ọ dị ugbu a, ọ pụtaghị na ọtụtụ mmetụta ndị dị na sunifiram ntụ ntụ si nyocha ma ọ bụ nke sayensị.
Mmetụta mmetụta ndị na-akọ na-abụ obere ma dịruo nwa oge ma gụnye mmụba nke okpomọkụ nke anụ ahụ, mmiri ọkụ na salivation, isi ọwụwa, nhụjuanya ntanetị, mụbaa mmetụta uche na ihe ntanetị, na ehighi ura. Mana ọ dị mkpa icheta na ọ dịghị ọmụmụ mmadụ ma ọ bụ ule na-enye nsogbu.